Muchikamu chino tiri kuzokuratidza maitiro ekuita yakachena kuisa ye macOS. Izvi zvinowanzo sarudzo yakanaka kana Mac yako ichimhanya nonoka kana neimwe nzira kusazvibata.
Ndichowo chinhu chinoshandiswa nevashandisi vemakomputa pavanenge vachiedza kubvisa hutachiona (kunyangwe paine gakava rakawanda pamusoro pekuti pane hutachiona paMac).
Tichatanga nekuratidzira maitiro ekuitira izvi kune iyo yazvino vhezheni ye macOS (macOS Big Sur panguva yekunyora), usati waenderera mberi kubhizimusi rinonyengera rekuisa kopi yakachena yechinyakare vhezheni ye macOS (Catalina, High Sierra, Sierra, El Capitan, Mojave, Yosemite kana yekare vhezheni ye OS X ). Kutaura nezvazvo, kana oild vhezheni iri izvo zvauri kutsvaga, zvingave zvakakodzera kutarisa kune imwe chinyorwa kwatino tarisa pane izvo zvachose: Maitiro ekurodha pasi nekuisa ekare mavhezheni eOS X pane Mac.
Usati watanga, iwe unofanirwa kuziva kuti kune nzira mbiri dzekugadzira yakachena macOS. Iyo yetsika nzira yaive yekugadzira bhaotable kopi yeiyo macOS inosimudza pane Flash drive kana USB tsvimbo uye wozogadzirisa yako dhiraivha usati waisa iyo bootable kopi kune yako Mac. Kune imwezve nzira yakapusa inobvumidza iwe kushandisa macOS Kudzoreredza iyo Mac inoshanda sisitimu pamusoro pewebhu. Tine dzidziso yakatarisana nezvekuita a yakachena kuisa macOS uchishandisa kudzoreredza.
Izwi renyevero: Kana iwe uchida kuita yakachena kuisa yeBig Sur kana Catalina uye wave kutomhanya Catalina maitiro acho akasiyana neshanduro dzapakutanga dzeMacOS. Iwe zvino uchawana mavhoriyamu maviri ekudzima: Macintosh HD-Dhata uye Macintosh HD. Isu tinotsanangura izvo zvaunofanirwa kuita nezve izvo pazasi.
Maitiro ekuchenesa kuisa macOS uchishandisa bootable USB
Usati watanga iwe unozoda zvinotevera:
Iyo 15GB kana hombe inobviswa USB flash drive kubata iyo yekumisikidza faira kune yedu yakasarudzwa vhezheni yemacOS. (Tiri kuzoibvisa, saka ita shuwa kuti haina chero data rakakosha.)
Admin ropafadzo dzeMac.
Kudzosera kumusoro, kungangoitika kana chimwe chinhu chikatadza kufamba. Mirairo izere pano: Maitiro ekuchengetedza Mac.
Ziva kuti zvine chekuita nezvakachengetedzwa, pamwe haudi kuzotora backup yeTime Machine kana iwe usiri kuda kuteedzera pamusoro peese marongero uye zvaunofarira zvine chekuita neyako yekare system Iwe unogona neimwe nzira kuyananisa ako ese maGwaro uye Desktop neICloud pane kumhanya izere backup, asi ita shuwa kuti zvese zvaunoda zviri mugore uye uzive kuti iwe ungarasikirwe sisitimu yekuisa uye kunyorera.
Nhanho 1: Fomata yekunze dhiraivha
Tiri kuzodzokororazve iyo yekumisikidza faira kune yedu yakasarudzwa vhezheni yemacOS uye kuichengeta pane USB tsvimbo kana yekunze dhiraivha. Asi usati waita izvo iwe unogona kugadzirira iyo USB drive nekuchigadzirisa icho.
Heano maitiro ekumisikidza yako USB drive nemazvo:
Vhura mu USB drive.
Enda kuApplication> Zvishandiso.
Vhura Disk Utility.
Sarudza dhiraivha uye tinya Erase. (Zita redhiza rinoda kuve "Risina zita", kana iyo Terminal raira pazasi iri kuzoshanda, saka itaidze zita kana zvichidikanwa.)
Sarudza Mac OS Yakawedzerwa (Yakanyorwa) semhando yemhando.
Sarudza GUID Chikamu cheMepu kubva pane Scheme sarudzo (kana usingaone izvi iwe uri mukutarisa kusiri iko - unofanirwa kusarudza dhiraivha yekunze, kwete mudziyo uri pazasi payo).
Disk Utility ichagadzira iyo partition uye kumisikidza iyo drive (zvinogona kutora chinguva).
Nhanho 2a: Tora iyo macOS yekuisa faira
Kana iwe uri kudzoreredza yazvino vhezheni ye macOS, kana kuisa idzva vhezheni ye macOS, nhanho inotevera iri nyore nyore kunyangwe nzira yekuwana iyo yekumisikidza ichave yakasiyana.
Kana iwe parizvino uchimhanya Catalina uye uchida kuita yakachena kuisa ye macOS Big Sur ipapo unogona kurodha pasi yekuisa package kuburikidza neSystem Preferences.
Vhura Sarudzo dzeSystem.
Sarudza Software Gadziridza.
Dhawunirodha iyo Big Sur yekuisa mafaera.
Kana iwe uchida kudzoreredza Big Sur uye wave kutomhanya Big Sur nzira yakanakisa yekuwana iyo yekumisikidza yeCatalina iri kuburikidza neMac App Store. Hechino chinongedzo ku Big Sur pane iyo Mac App Store. Kana iri Catalina iwe yaunoda iwe unogona kuzviwana izvo pano. Neimwe nzira vhura Mac App Store uye tsvaga Catalina.
Paunenge iwe wawana Big Sur pane iyo Mac App Store tevera iyi mirairo.
Hit Download kana Tora (zvinoenderana neshanduro yeMac App Store yauri kushandisa).
Iwe unogona kuwana meseji yambiro panguva ino, ichikuudza kuti iyi vhezheni ye macOS 'yatove kuiswa pane ino komputa. Ungada kuenderera mberi here? ' Dzvanya Enderera.
ICatalina inoisa mafaera ichatanga kurodha pasi.
Iyo yekumisikidza faira ichave yakawanda GB. Big Sur iri 12.6GB, semuenzaniso, saka tarisira kurodha pasi kutora chinguva.
Nhanho inotevera inofanirwa kuratidza pane izvo zvausingafanire kuita, pane izvo zvaunofanira kuita:
Kana iyo macOS installer yapedza kudhawunirodha iyo yekuisa inovhura yega, asi isu hatisi kuda kuishandisa saka usadzvanya kuti utange kuisirwa!
Dzvanya Command + Q kuti usiye kunze kweiyo installer.
Tsvaga iyo yekuisa faira (ichave iri muApplications folda yako, kana iwe unogona kuitsvaga uchishandisa Spotlight (command + Space uye tanga kutaipa Catalina kana Big Sur).
Kana iwe uchingoda kuisa Big Sur, unogona kusvetuka nhanho inotevera, kwatinenge tichiratidza nzira yekuchera iyo yekuisa faira rekare vhezheni yeMacOS kana Mac OS X.
Nhanho 2b: Tora iyo yekuisa faira yeiyo yekare vhezheni yeMacOS
Kune ekare vhezheni dzeMacOS uye Mac OS X zvakatonyanya kuoma kuwana iyo yekuisa faira: Apple haipe kurodha echinyakare OS shanduro kuburikidza neyakajairwa chitoro kumberi, uye kutsvaga zita racho hakuwane zvauri kutsvaga. nokuti.
Tine gwara rakadzama rekuti kuwana shanduro dzekare dze macOS pano, asi isu tichatsanangura zvaunofanira kuita pazasi.
Zvichienderana neshanduro yeMacOS yauri kuita, iwo anoisa edzimwe shanduro dzemacOS anogona kuwanikwa muChakatengwa chikamu cheApp Store.
Pinda muMac App Store neApple ID yawakashandisa wobva wadzvanya Yakatengwa mubhara remenu kumusoro. Nyora pasi runyoro rwemapurogiramu awakatenga kana kudhawunirodha mahara (izvo zviri muhurongwa hwepawakaadhawunirodha) uye tsvaga zita revhezheni yako yawakasarudza: El Capitan, Yosemite kana chero. Dzvanya download.
Nekudaro, pane zvikonzero zvishoma nei izvi zvingasashanda kwauri:
Kana iwe wakatoisa Mojave kana Catalina paMac yako haugone kutsvaga nyore shanduro dzekare dzemacOS kubva kuMac App Store.
Iwe hauzowani vhezheni yeMacOS yako Mac yakatumirwa nayo muChakatengwa chikamu cheApp Store.
Uye iwe hauzowani shanduro dzemacOS muchikamu chakatengwa kana usina kumboisa iyo vhezheni.
Nekudaro, nerombo rakanaka zvichiri kugona kubata dzimwe shanduro dzemacOS kana iwe uchimhanyisa vhezheni nyowani kupfuura Sierra.
Catalina iri paMac App Store pano.
Unogona kuwana macOS Mojave Kuburikidza neiyi link.
Download High Sierra pano.
Sierra iri pano.
El Capitan inogona kutorwa pasi kubva pane iyi link.
Yosemite inowanikwa pano.
Sezviri munhanho iri pamusoro, kana uchinge wadhawunirodha mugadziri usamhanye - ingovhara iyo yekuisa kana ichivhura.
Kuti uwane mamwe mazano ekubata kunyange ekare edhisheni yeMac OS, ona Nzira yekuwana sei shanduro dzekare dze OS X.
Danho 3: Gadzira bootable USB dhisiki
Tevere tinoda kushandura USB drive kuita bootable USB dhisiki kuitira kuti isu tigone kuishandisa kuisa kopi nyowani yeMacOS paMac yedu mushure mekunge tazvigadzirisa (iyo nhanho ichauya gare gare mune ino tutorial).
Tine mirairo yakazara pamusoro Maitiro ekugadzira bootable macOS yekuisa drive mune imwe chinyorwa, asi tichamhanya nepakati pekutanga pano.
Isu tichagadzira iyo bootable drive tichishandisa chiteshi, iyo yaunogona kuvhura paMac yako nekudzvanya Command + Space bar uye kunyora Terminal.
Batanidza iyo USB drive yawakafomatidza kare kuMac yako. Ita shuwa kuti inodaidzwa Kusina Untitled - ita zita kana zvichidikanwa (izvi zvichakubatsira iwe kuisa iwo mameseji chaiwo muTerminal mumatanho anotevera).
Kugadzira yekumisikidza kwave kuri nyore kubva pakusvika kweMavericks muna 2013 nekuda kweiyo Terminal command createinstallmedia yakasvika mune iyoyo vhezheni. Heino nzira yekuishandisa:
Vhura iyo Terminal application paMac yako (iwane nekutsvaga uchishandisa Command + Space uye typing Terminal)
Iye zvino kopira uye unamate iwo anotevera mavara muTerminal (Ichi chinyorwa ndecheBig Sur - isu tinosanganisira iyo mameseji anodiwa kune dzimwe shanduro dzemacOS mune ino chinyorwa) Paunocheka nekunamira iwo anotevera mameseji muTeminari tarisa kuti anochengeta - sezvatakanzwa nezve vanhu vanonamira mu - uye vachishandura ku -)
sudo / Zvishandiso/Isa macOS Big Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia -volume /Volumes/MyVolume (apo MyVolume izita redhiraivha yekunze yauri kushandisa - inogona kunge isina Untitled)
Isa password yako (iwe hausi kuona password ichioneka).
Dzvanya Return zvakare.
Terminal ichayambira kuti yave kuda kudzima drive. Kana iwe uchida kuenderera mberi dzvanya Y uye wozodzokera. Maitiro acho anogona kutora nguva, uchaona "Erasing Disk: 0%… 10%… 20%… 30%…100%…
Inotevera Terminal ichapedza maminetsi mashoma kukopa iyo yekuisa faira kune yako drive. "Kukopa mafaera ekuisa ku diski ... Kopa zvakakwana" uye zvichingodaro zvichaonekwa muhwindo reTeminari. Zvekare, izvi zvinogona kutora nguva - zvakatora mazera edu eMac kuenda kubva pa0% kusvika gumi%…
Kana iyo bootable drive yagadzirirwa iwe uchaona izwi rekuti Zvaitwa. Zvinogona kutora nguva.
Iye zvino iwe une yekuisa pane yekunze drive iwe unogona kushandisa iyo kuisa makopi eMacOS pane akawanda Macs - izvo zvinogona kubatsira kana iwe uri admin kune akawanda masisitimu.
Nekudaro, kana uri kuverenga izvi nekuti iwe unoda kupukuta Mac yako uye kuita yakachena kuisa, verenga pa…
Danho 4: Pukuta Mac yako
Iye zvino tagadzirira kuisa kopi ye macOS kubva kune yekuisa dhiraivha paMac yedu. Kana iwe uchida kuita nyowani yekuisa (uye kupukuta zvachose Mac yako) inguva yekugadzirisa yako Mac yekutanga-up drive.
Heano maitiro ekuita kutsva kuisirwa macOS kana usiri kutomhanya Catalina kana Big Sur.
Batanidza yako boot drive.
Tanga kumusoro - kana kutangazve - Mac yako uchibata pasi Option kiyi (inozivikanwawo seAlt). Izvi zvinokuendesa kune Startup Manager.
Sarudza kuisa yako yakasarudzwa vhezheni yeMacOS kubva kune yekunze drive.
Sarudza Disk Magetsi.
Sarudza yako Mac yekutanga kumusoro disc, pamwe inonzi Macintosh HD kana Imba.
Mirira kuti dhisiki rako rekutanga rigadziriswe.
Dzokera kune huru Utilities menyu uye sarudza Isa macOS.
Sarudza yako yekutanga drive senzvimbo yekuisa macOS.
Kana kuisirwa kwapera, unogona kudzoreredza maapplication uye zvigadziriso kubva kune yako backup, kana kudhawunirodha zvakare nemaoko.
Maitiro ekudzima dhiraivha yako muCatalina
Cherechedza: kana iwe uchimhanyisa macOS Catalina kana Big Sur unenge uine maviri mavhoriyamu: Macintosh HD uye Macintosh HD - Data. Kana iwe uchida kuita yakachena yekuisa yeCatalina kana Big Sur pamusoro peiyo iripo yekumisikidzwa kweCatalina iwe unozofanirwa kutanga wadzima Macintosh HD - Dhata vhoriyamu. Isu tinofukidza maitiro ekuita izvi mune zvakadzama pano: Maitiro ekuseta uye kupukuta Mac.
Macintosh HD -Data muCatalina/Big Sur ndiko kunochengetwa data rako zvakasiyana kune kuisirwa macOS.
Kungodzvanya pane - bhatani kana enda kumenyu uye sarudza Rongedza> Delete APFS vhoriyamu.
Iwe uchaona meseji inokunyevera kuti izvi zvichabvisa zvachose data rako. Dzvanya pakanzi Delete. Usasarudza Delete Volume Group.
Mirira vhoriyamu ichidzimwa.
Ipapo iwe unogona kuenda mukudzima yako Macintosh HD vhoriyamu sepamusoro.
Nhanho 5: Isa macOS
Iye zvino unogona kushandisa yako bootable installer kuita yakachena kuisa macOS pane yako yakapusika Mac.
Maitiro ekuisa iyo OS kubva kune iyo bootable installer yakasiyana zvishoma kana iwe une M1 Mac (inozivikanwawo seApple Silicon) kana Intel processor mukati meMac yako. Tichamhanya nenzira mbiri.
Muzviitiko zvese izvi iwe uchafanirwa kuve neMac yako yakabatana neInternet. Inodawo kuenderana neshanduro yeMacOS yauri kuyedza kuisa (haugone kuisa macOS yakakura kupfuura Big Sur paM1 Mac).
Maitiro ekuisa macOS kubva kune bootable yekuisa
Kana iwe uine Intel-powered Mac heino maitiro ekuisa macOS kubva kune bootable yekuisa:
Batanidza yako bootable installer
Bvisa Mac yako.
Dzvanya uye ubate Sarudzo / Alt apo Mac inotanga - ramba uchidzvanya kiyi kusvika waona skrini inoratidza vhoriyamu yebhootable.
Sarudza bootable installer volume.
Sarudza Isa macOS kubva pahwindo reZvishandiso rinoonekwa.
Zvino tevera iyo onscreen mirairo kuti uite yako yakachena yekuisa.
Kana iwe uine M1 Mac heino maitiro ekuisa macOS kubva ku bootable installer. Sezvatataura pamusoro, haugone kuisa macOS yakakura kupfuura Big Sur paM1 Mac.
Dzvanya bhatani remagetsi kuti ubatidze Mac - asi ramba wakadzvanya kudzamara waona hwindo rekutanga sarudzo kusanganisira vhoriyamu yako yebhootable.
Iyo macOS inosimudza inofanirwa kuvhura - kana ichitevera iyo onscreen mirairo yekuita yakachena kuisa.